Isbahaysiga Sucuudiga Ee Yemen Ka Dagaallama Oo Xabbad Joojin Ku Dhawaaqay | Dhexnimo Media
Home Wararka Isbahaysiga Sucuudiga Ee Yemen Ka Dagaallama Oo Xabbad Joojin Ku Dhawaaqay
Isbahaysiga Sucuudiga Ee Yemen Ka Dagaallama Oo Xabbad Joojin Ku Dhawaaqay
Isbaheysiga uu hoggaamiyo Sucuudiga ee la dagaallamaya xoogagga Xuutiyiinta ee Yemen ayaa ku dhawaaqay xabad joojin, sida ay sheegeen saraakiishoodu.
Ilo wareedyo ayaa BBC-da u sheegay in xabbad-joojinta ay dhaqangelayso Khamiista, iyada oo lagu taageerayo dedaallada Qaramada Midoobay ee lagu soo afjarayo dagaalkan shan sano jirsaday.
Isbahaysiga, oo ay taageerayaan quwadaha millatariga ee reer Galbeedka, ayaa la dagaallamayay xoogagga Xuutiyiinta ee isbahaysiga la ah Iran ilaa iyo bishii Maarso 2015.
Ma cadda in ciidamada Xuutiyiinta ay sidoo kale samayn doonaan xabbad joojin, dhankooda ah.
Bishii hore Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres wuxuu ugu yeedhay dadka ku nool Yemen inay joojiyaan dagaalka oo ay kor u qaadaan dadaallada looga hortagayo suurtagalnimada in cudurka Coronavirus uu saameeyo.
Wuxuu ugu yeedhay xisbiyada dalka in ay la shaqeeyaan ergeygiisa gaarka ah Martin Griffiths si loo gaardho xasillooni dalka oo dhan ah.
Waxa uu yidhi: “Dhinacyadu waa inay hadda ka faa iidaystaan ​​fursaddan oo ay si dhakhso leh u joojiyaan colaadaha oo dhan sida ugu dhaqsaha badan.”
Labada dhinac ayaa la filayaa inay ka qeybgalaan shir dhanka muuqaalka ah ah oo ay uga wada hadlayaan xabbad joojinta. Hindisaha ayaa ku baaqaya in la joojiyo dhammaan weerrarada hawada, dhulka iyo baddaba.
Qoraal ka soo baxay ciidamada isbahaysiga ayaa lagu yiri: “Munaasabadda qabashada iyo guuleysiga dadaallada ergeyga Qaramada Midoobay ee Yemen iyo in la yareeyo dhibaatada dadka walaalaha ah ee reer Yaman iyo in laga shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa musiibada Corona iyo ka hortagga faafitaankiisa, isbahaysigu waxa uu ku dhawaaqayaa xabad joojin dhameystiran muddo labo toddobaad ah, oo ka bilaabaneysa Khamiista. “
Xaaladda Yemen ayaa muddo dheer lagu tilmaamaa inay tahay dhibaatada ugu daran ee bina-aadamnimo ee dunida. Dagaalku waxaa ku naf waayey nolosha dad badan oo rayid ah wuxuuna waddanka ku sii dhowaaday qarka u dumidda.
Qaramada Midoobay ayaa jebisay wadahadaladii hore, laakiin tani waxay noqonaysaa tii ugu horraysay ee isbahaysigu ku dhawaaqo xabbad-joojin waddanka oo dhan ah.
Previous articleAkhriso 10-ka Wadan ee laga helay kiisaska ugu badan ee Caronavirus
Next articleHal magaalo oo caabuqa Caronavirus dadka uu ku dhacay ka badan yihiin dadka uu…